जानुकालाई विबाह गर्ने आश्वासन दिएर भगाए भिमले तर..भिडियो हेर्नुहोस ! – Sanjal Nepal
Homeसमाचारजानुकालाई विबाह गर्ने आश्वासन दिएर भगाए भिमले तर..भिडियो हेर्नुहोस !
जानुकालाई विबाह गर्ने आश्वासन दिएर भगाए भिमले तर..भिडियो हेर्नुहोस !
December 25, 2020 admin समाचार 1386
काठमाडौ । हिजो आज डिर्भोस बाक्लो रुपमा हुन थालेको छ ।श्रीमान श्रीमती छुटिन र जोडिन कुनै समय लाग्दैन । कतिबेला श्रीमानका गल्तीहरुका समाचार आउछन मिडियामा त कतिबेला श्रीमती फरार भएका । कहिले श्रीमानबाट श्रीमती पि,डित भए भनेर फोन आउछन भने कहिले के भनेर ? हो आजको हामीले तपाईमाझ प्रस्तुत गर्न लागेको घटना पनि यस्तै छ ।
बिस्तारै कुरा बुझदै जादा यि युवती त श्रीमानबाट एकदमै पि,डित पो रहेछिन । न त अहिलेसम्म श्रीमानले बिबाह दर्ता गरिदिएका छन न त सिन्दूरनै राखिदिएका छन केबल यिनको प्रयोग गरेर ८ महिनाको बच्चासमेत जन्माईसकेका छन । यिनको घर सिन्धुली हो, नाम जानुका थापा क्षेत्री । श्रीमानको नाम भिम तामाङ हो जो यो सानी नानी जन्मेपछि उनलाई छोडेर अहिले सम्पर्क बिहिन छन कता छन के गर्दैछन ? अतोपतोनै छैन । श्रीमती अहिले रुदै मिडियामा आएर आफना गुनासो र बेदना पोख्छिन र रुदै भन्छिन कि मलाई कसेलै पनि हेरेनन न त परिबारले न त श्रीमानले, हेरौ —
अनौठो मन्दिरमा जहाँ कुण्डमा ठुला नागको आकृति देखिने
November 26, 2020 admin समाचार 1878
नेपाली चलचित्रमा सर्बाधिक रुचाइएकि नायिका प्रियंका कार्की र उनको श्रीमान बिहे पछि पहिलोपटक खुलेरै मिडियामा आएका छन।उनीहरु बिचको प्रेम सम्बन्ध देखि बैबाहिक जीवनको बिषयमा खुलेरै मिडियामा उनीहरु एक अर्काले आफ्नो आफ्नो कमजोरी बाहिर ल्याएका हुन्।
December 16, 2020 admin समाचार 6279
काठमाडौ । एउटी आमालाई यस्तो अवस्थामा काठमाडौको तीन कुनेमा अलपत्र अवस्थामा फालेर हिड्ने सन्तानको खोजीका लागि यो तस्बिर मानवसेवा आश्रमले सार्वजनिक गरेको हो । अन्तिम अवस्थामा रहेकी एक महिलालाई तीन कुनेवाट उद्दार गरिएको भएपनि उनको
December 11, 2020 admin समाचार 5421
वलपरासी – सुस्मा नाम गरेकी एक महिला जो डण्डामा बस्दै आएकी थिईन् । उनी विबाहीत हुनुका साथै एउटी छोरीको आमा पनि हुन् । सुस्माको ८ वर्षकी छोरी पनि छन् । एउटी बच्चाकी आमा उनी छिमेकीलाई
LEX 18 agenda conversation: Job club (544612)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (515062)
dole traces grow as seasonal jobs dry up (131877)